मुख्यमन्त्री पोख्रेलको राजीनामाभित्रको रहस्य खुल्यो।एमाले भित्र खैलाबैला। जसपा अलपत्र??अब के हुन्छ त? - News20 Media
May 2, 2021 N20LeaveaComment on मुख्यमन्त्री पोख्रेलको राजीनामाभित्रको रहस्य खुल्यो।एमाले भित्र खैलाबैला। जसपा अलपत्र??अब के हुन्छ त?
प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव निष्कृय पार्न पोखरेलले राजीनामा दिएको बुझ्न सकिन्छ। अब अविश्वासको प्रस्ताव निष्कृय भएको छ । उनी एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।
यसअघि जनता समाजवादी पार्टीको ६ सांसदसहित ८४ सदस्यसंख्या हुँदा पोखरेल अल्पमतमा थिए । एमालेको ४१ सिट संख्या मात्र थियो । तर, जसपाभित्रको विवादले ४ सांसद अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा उभिँदा कारबाहीको कदम चालियो । मन्त्री बनेका ४ सांसद पदमुक्त भए । जसपा ६ बाट २ सांसद संख्यामा झर्यो ।
लुम्बिनी मा एमालेका ४१, काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जसपाका २, जनमोर्चाका १ सांसद संख्या रहेका छन् । जसपाको ६ सांसद संख्या रहेकोमा ४ जनाले पार्टी निर्णय विपरित कार्य गरेकाले सांसद पदबाट पदमुक्त हुनुपरेको छ ।
अब पोखरेल एक बहुमतको मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः भएको छ । उनलाई हटाउन अल्पमतमा पानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेकपा एमाले फुट्नुपर्ने अवस्था बन्नुपर्छ । या त एमालेको कम्तिमा २ सांसदले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बनाउने गृहकार्य सुरु
राजनीतिले लियो डरलाग्दो रुप।स्थायी समितिको बैठक सकिए लगत्तै ओलि राष्ट्रपति निवासमा ।। अब के होला?